लम्सालले खोजे, नागरिक सक्षम बनाउने लोकतन्त्र, चापागाईँले सोधिन, खोई नारीको सम्मान ? – ebaglung.com
लम्सालले खोजे, नागरिक सक्षम बनाउने लोकतन्त्र, चापागाईँले सोधिन, खोई नारीको सम्मान ?
२०७४ आश्विन ९, सोमबार १३:३४	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
कुस्मामा दशैँ तिहार शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रममा के भने एमाले सांसदहरुले ?
महेन्द्र केसी, पर्वत २०७४ असोज ९ । नेपालीहरुको महान चाड विजय दशमी र शुभ दीपावलीको अवसरमा पर्वत उद्योग वाणिज्य संघले सोमबार दशैँ तिहार शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
सो कार्यक्रमलाई नेकपा एमालेका पर्वत क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद विकास लम्साल तथा सामुपातिक सांसद कल्पना चापागाईँले सम्वोधन गरेका छन् ।
सांसद लम्सालले संवोधनका क्रममा नागरिक सक्षम बनाउने लोकतन्त्र स्थापित हुन नसकेको बताए भने सांसद चापागाईले नारीको अस्तित्वको सम्मान र पहुँच हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
साँसद लम्सालले नागरिकको हक अधिकारहरु नेपालको संविधान २०७२ मा संरक्षित भएता पनि पूर्णरुपमा संविधान कार्यन्वयन भैनसकेकोले अझै पनि नागरिकलाई सक्षम बनाउने लोकतन्त्रको अभ्यास हुन नसकेको बताए ।
लोकतन्त्रले स्थापित गरेको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका कारण पनि लोकतन्त्रले नागरिकलाई सक्षम बनाउन अझै नसकेको भनाई थियो । जिल्लाका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज मिलेर अगाडि बढेमा र युवाहरुलाई लघुउद्यममा प्रोत्साहन गर्न सकेमा लोकतन्त्रमा सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न सकिने उनको तर्क थियो ।
सांसद लम्सालले दशैँको बेलामा नयाँ नोटको लागि बैकमा नागरिकको भीड लागेको देख्दा चिन्ता लागेको बताउदै बैंकहरुमा खुद्रा र नयाँ नोटका लागि नागरिक घन्टौसम्म लाइनमा बस्दा समेत सटही गर्न नपाउन स्थानीय प्रशासनको कमजोरी भएको आरोप लगााए ।
राज्यले दशैको लागि करोडौ रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट निकालेको छ तर जनताको हातमा अझै नयाँ नोट परेको छैन। कमसे कम दशैको बेलामा नागरिकलाई आवश्यक नयाँ नोट समयमै पाउने व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउन नसक्नु आफैमा दुखद भएको बताए ।
अर्की एमाले सांसद चापागाईले भनिन् बडा दशैमा देवी स्वरुपमा दुर्गा, कालीको पूजा अर्चना हुन्छ, तिहारमा लक्ष्मी माताको पुजा गरिन्छ तर यर्थाथमा नारीलाई अझै पनि समाजले सम्मान दिएको छैन ।
देशमा यत्रो आमुल परिर्वतन भयो, ५१ प्रतिशत नारीको माथिल्लो निकायमा समेत पहुँच पुग्ने व्यवस्था कायम भयो तर अझै पनि समाजमा महिलाहरु अपमानित हुनु परेको उनको तर्क थियो।
दशै तिहारमा नारी शक्तिको पूजा गर्नेहरुले नारी जगतलाई अपहेलना गर्छन आखिर किन ? उनको प्रश्न थियो । महिला विकास र सशक्तिकरणमा जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको भन्दै सांसद चापागार्यँले अब महिलाहरुको सम्मान गर्न आवश्यक रहेको औलाइन् ।
पूर्व सांसदलाई पेन्सन दिने कानून बनाउन लागेका छैनौँ, यस्मा टीकाटिप्पणी नगरे राम्रो-सांसद जोशी